Mpanamboatra talismans sy mpamatsy - China Talismans Factory
amulet amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Lucky amulet 512508
Mpivarotra fiantrana am-pilaminana (tsodrano roa sosona) Kit ny peta-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tànana - natao amboradara telo-habe, avelao ny tanana hanao ny fihetseham-ponao Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
amulet amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Lucky amulet 512509
Mpivarotra fiantrana am-pilaminana (fahasambarana indroa) kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tanana - vita amboradara telo refy, avelao ny tanana hanao ny fihetsehamponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
amulet amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Lucky amulet 512530
Omamori mivarotra mafana (Andriamanitra hitahy) mampiasa kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tànana - amboradara telo refy, avelao ny tànana haneho ny fihetseham-ponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
amulet amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Lucky amulet 512531
amulet amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Lucky amulet 512532
Omamori (gana) mpivarotra mafana manao kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tanana, vita amboradara telo refy, avelao ny tànana haneho ny fihetseham-ponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
amulet amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Lucky amulet 512533
Omamori mivarotra mafana (tonga gana mahafatifaty) Kitaro peta-kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita tanana - nanao amboradara telo refy, avelao ny tanana hanao ny fihetsehamponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
amulet amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Lucky amulet 512536
Omamori (parvenu) mpivarotra mafana manao kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tànana, vita amboradara telo-habe, avelao ny tanana hanao ny fihetseham-ponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
amulet tsara volo Textiles & Fabric Crafts Shrine Lucky amulet 512535
Omamori mivarotra mafana (Aza mihinana tsy matavy) mampiasa kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tanana, vita amboradara telo refy, avelao ny tànana hamoaka ny fihetseham-ponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
amulet amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Lucky amulet 512560
Ny varotra Omamori (fiarovana fiarovana) misy kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tanana - vita amboradara telo refy, avelao ny tanana hanao izay hilazana ny zavatra tsapanao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.
amulet amulet Textile & Fabric Crafts Shrine Lucky amulet 512561
Omamori (Love you) mpivarotra mafana, kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny tanana, vita amboradara telo refy, avelao ny tànana haneho ny fihetseham-ponao. Lamba avo lenta, fanontana famaritana avo lenta, famokarana tsotra.